Famokarana trondro Tsy maharaka ny filan’Antananarivo
Lalàn’ny fandraharahana Tombony ho an’ny Malagasy
Miambakavaka ary misavoritaka tanteraka ny mpandraharaha Malagasy noho ny tsy fahamarinan-toeran’ny tontolony eto Madagasikara araka ny nambaran’ny mpandraharaha sady depioten’i Faratsiho, Rasolonjatovo Honoré.
Faritra Vakinankaratra Sahirana amin’ny famoaham-bokatra
Manatsara ny toekarem-pirenena ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharahana any amin’ny faritra. Ho an'ny faritra Vakinankaratra manokana, efa manomboka hita taratra ny ezaka ataon’ireo mpandraharaha na dia maro aza ireo sakana.
Nanatanteraka atrikasa sy fifampizarana traikefa mahakasika ny fiompiana trondro tamin’ilay tetikasa Ampiana vatsian’ny Vondrona Eoropeanina vola mandritra ny 5 taona ireo fikambanan’ny tantsaha mpiompy mivondrona ao amin’ny APDRA.
Tanjona ny hikarohana mahakasika ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro eto Analamanga sy Vakinankaratra ary any Itasy. Nifarana omaly talata 13 aogositra ity tetikasa Ampiana vatsian’ny Vondrona Eoropeanina vola ity. 1500 no isan’ireo mpiompy trondro misitraka ny tetikasa ary kaominina miisa 30 manodidina ny renivohitra no nahazo tombony. Amin’izao fotoana izao dia tafakatra 15000 Ariary farafahakeliny ny kilaon’ny vidin’ny trondro eto Analamanga ary tsy maharaka ny filan’ny mponina mihitsy ny vokatra. Maro anefa ny tanimbary sy ny dobo midadasika ahafahana miompy trondro saingy olana ihany koa ny tsy fahampian’ny mpamokatra. Manampy trotraka ihany koa ny tsy fahaizan’ny mpiompy trondro noho ny tsy fahampian’ny fampiofanana. Izany rehetra izany anefa no manaratsy ny kalitaon’ny trondro ka ilana ezaka. Mampitaraina ireo teknisianina ihany koa ny vanimpotoana mangatsiaka tahaka izao izay mampihena ny vokatra tahaka ny Tilapia izay mifidy toetr’andro.